Blockchain News 24 Janoary 2018 - Blockchain News
Janoary 24, 2018 Admin
Blockchain News 24 Janoary 2018
Grayscale fampiasam-bola mba hanomboka dimy vaovao ao amin'ny vola cryptocurrency 2018
Grayscale Investments, izay nanao azy mora kokoa ho an'ny mpampiasa vola mahazatra ny miloka amin'ny Bitcoin, mikasa hanatitra vaovao efatra afa-tsy vola crypto vola ary ny iray hafa mifototra amin'ny harona nomerika vola araka ny fanombohan'ny Aprily.
"Tamin'ny faran'ny telovolana voalohany tamin'ity taona ity, Ho isika manana valo tanteraka ny fampiasam-bola vokatra,"Grayscale Tale Mpitantana Michael Sonnenshein hoy tao anaty tafatafa Talata in Vancouver.
Tany am-piandohana Grayscale Bitcoin Investment Trust, izay ny mpivarotra ny-ny-mifanohitra ao amin'ny U.S., dia nifanosika mihoatra noho ny 1,300 isan-jato ny tamin'ny taon-dasa toy ny rafitra mpampiasa vola nahazo vola madinika mividy nomerika mivantana nefa mitady hatsiaka ny tombony ny cryptocurrencies.
Sonnenshein hoy ny vola ho narafitra tahaka ny Bitcoin Investment Trust, manome mpampiasa vola ny fahafahana hahazo hatsiaka ho nomerika ny vola amin'ny alalan'ny fividianana ny fiarovana.
Sonnenshein hoe: "Izany dia hihazona ny fiara ambony rano nomerika vola, dia ho tsena Cap-mavesatra, ary voalanjalanja amin'ny fototra isaky ny telo volana. "
The New York miorina mafy dia "mitandrina ny sofinay zavatra misokatra ny mpampiasa vola hatsiaka te ho,"Hoy Sonnenshein. "Raha misy ny vola sasany fa ny mpampiasa vola no mangataka antsika ho mpanome endrika amin'ny vokatra manodidina, Avy eo dia te-ho eo hanome fahafaham-po ny tinady. "
Weiss Rating fahafahana misafidy namoaka naoty tao amin'ny cryptocurrencies – Bitcoin Nahazo C +
Weiss Ratings, ny firenena tsy miankina mpitarika ny sampan-draharaha ara-bola ampy andrim-panjakana, mamoaka ny firenena amin'izao fotoana izao ny mandrakizay voalohany naoty amin'ny cryptocurrencies amin'ny alalan'ny sampan-draharaha ara-bola ampy.
Inona no mahatonga Weiss 'fidirana ho cryptocurrency naoty zava-dehibe dia ny tantaran'ny fahaleovan-tena sy ny fampiasam-bola araka ny marina eo amin'ny sehatra hafa, araka ny voalaza ny U.S. Governemanta Accountability Office (Gao), Barron ny, The Wall Street Journal, ary ny The New York Times, ankoatry ny zavatra hafa.
Ny Weiss Cryptocurrency Ratings mamantatra Price doza, valisoa mety, blockchain teknolojia, fananganana, fiarovana, ary ny lafin-javatra hafa. "Noho ny fiovana haingana eo amin'ny tahirin-kevitra,"Hoy i Weiss, "Fanavaozana sy ny downgrades kokoa matetika noho ny amin'ny sehatra hafa isika, manarona."
Bitcoin (laharana C +) mahazo tsara maro ho an'ny fiarovana sy ny fananganan-jaza miely patrana. Fa lehibe ny mahita tambajotra bottlenecks, niteraka fahatarana sy ny fifanakalozana avo vola lany. Na dia eo aza ny ezaka mafy mitohy izay fanatanterahana ny sasany fahombiazana am-boalohany, Bitcoin tsy manana rafitra avy hatrany fa avy hatrany ny rindrambaiko Hanavao ny fehezan-dalàna.
Weiss Ratings, izay nanomboka tamin'ny 1971, tahan'ny 55,000 andrim-panjakana sy ny fampiasam-bola. Tsy toy ny Standard & ny mahantra, Moody ny, Fitch sy A.M. Best, Weiss tsy manaiky onitra na inona na inona avy amin'ny fikambanana dia tahan'ny.
Mivatra dia ampy Bitcoin fanohanana
Fandoavam-bola intsony processeur mivatra manohana Bitcoin toy ny fandoavam-bola fomba fiasa manomboka Aprily 2018.
Mivatra nanomboka nandray Bitcoin in 2014 fa ankehitriny Bitcoin mitanisa ny saram barotra sy ny fandraisana ho mpikambana somary miadana heny ny Fandresen-dahatra ny mifarana ny fifandraisana amin'i Bitcoin.
Mandinika ny governemanta Koreana Tatsimo cryptocurrency fifanakalozana’ fiarovana
Korea Atsimo Bitcoin fifanakalozana dia nandinika ary tsy misy fiarovana mivory fitsipika, araka ny governemanta Koreana Tatsimo. Tsirairay ny 8 fifanakalozana maso dia hita fa “tsy ampy” sy ny tolo-kevitra dia natao mba hanatsarana ny fiarovana.
New lalàna dia hitombo lamandy sy ny fotoana toromarika ho an'ny fifanakalozana mba hanatsarana ireo mba hihaona amin'ny fepetra na hiatrika azo atao fanakatonana.
Izany dia mampiseho ny governemanta Koreana Tatsimo no mandray cryptocurrency fifanakalozana ho zava-dehibe sy sarobidy ny fiarovana.
Digital Sandam-bola Auditor Friedman LLP manala milaza ny Bitfinex rehetra avy amin'ny tranonkala
Friedman LLP, ny vola nomerika auditor service, nesorina tsy miresaka an'i Bitfinex teo aloha amin'ny maha-mpanjifa, dia nesoriny tsy misy mahatsiaro azy tsy hanao izay vaovao fahana.
Izany dia tonga rehefa mitombo ny ahiahy ny fifandraisana misy eo Bitfinex sy ny hampijanona ny USDT (hampijanona famantarana) dia ho minted ny tapitrisa tamin'ny herinandro lasa.
City in Vermont ny mampiasa blockchain ny tany lisitra rakitsoratra
Ny tanànan 'i Burlington Atsimo, Vermont, dia trialing tany fisoratana anarana rafitra izay mampiasa blockchain izay tafiditra ao ny rafitra ho an'ny firaketana ny tompony.
The City Clerk biraon'ny Alatsinainy nanambara fa voalaza miara-miasa amin'ny blockchain startup Propy mitahiry tany firaketana fitantanana antontan-kevitra, araka ny fanambarana an-gazety. Ny mpanamory Ny tanjona dia ny hampitombo kokoa mahomby sy azo antoka ho tena toetrany masiaka natao tamintsika varotra miaraka amin'ny tanjona hafa ny fanombanana tsara ny fomba fampiasana ny sehatra ara-blockchain dia mampihena ny vola lany amin'ny fitantanana mitahiry tany antontan-kevitra, raha ampitahaina amin'ny rafitra nentim-paharazana.
Atsimo City Burlington ny Clerk, Donna Kinville, hoy ny tanàna “dia mijery hatrany ny ao mandray soa avy teknolojia izay mampitombo ny fanaterana ny tolotra ny mponina. Vonona izahay ianarantsika avy amin'izany Propy mpanamory.”
Nordea banky mandrara ny mpiasa avy amin'ny varotra Bitcoin
Nordea, Eoropa Avaratra banky iray miorina avy any Failandy, dia nilaza izany rehetra ny 31,500 mpiasa tsy afaka varotra Bitcoin.
Nordea dia hametraka ny fandraràna avy Feb. 28, araka ny board nanaiky hiandany noho ny "maha unregulated" ny tsena, mpitondra tenin'ny hoy Kellberg Afroditi-telefaonina ny Alatsinainy.
"Tsy fanao miely patrana manerana ny banky indostrian'ny mba hamerana ny tantara mifandray manokana ny mpiasa mba tsy nandray azy ireo toerana ambony ao tombantombana fampiasam-bola, na izay mety hampiharihary azy ho any amin'ny fahavoazana ara-bola mety ka noho izany ny ara-bola fiantraikany laza,"Hoy Kellberg. "Koa Nordea, toy ny banky, no manan-jo niainga politika ao amin'io faritra io izay mihatra ny mpiasa. "
Nordea hoy ny politika "dia ahitana ny tetezamita sakafo ho an'ny mpiasa amin'ny efa misy Holdings, ary mamela ho an'ny sasany maningana." Mpiasa izay efa manana Bitcoin dia "navela Holdings efa misy foana."
Nordea no voalohany Eoropeana lehibe banky mba hametraka toy izany ny fandraràna.
Ny fintech sandrin'i G ...
$20M Etera voajirika en ...
Previous Post:Iza moa John Hyman, na inona no fantatsika momba ny fampiasam-bola telegrama mpanolotsaina
Next Post:Robotrading na boky fampianarana Trading